Weerarkii Xabsiga Boosaaso oo horey loola socday | KEYDMEDIA ONLINE
Waxay iska indha-tireen Saraakiisha amniga inay kahor tagaan weerarka oo xogtiisa lasiiyay sanadkii hore.
BOOSAASO, Soomaaliya - Taliyihii hore ee DANAB Jeneraal C/raxmaan Cumar Jeeni-qaar ayaa sheegay in 7 bilood kahor uu ku wargeliyay laamaha amniga Puntland weerarkii habeen hore lagu qaaday saldhigga Boosaaso.
Wuxuu nasiib-darro ku tilmaamay in la iska indha-tiray digniinta uu bixiyay ee ku saabsan inay Al-Shabaab qorsheynaysay weerarka sanadkii hore, iyadoo wixii uu ka digayay ay dhaceen, taasina ay tahay mas'uuliyad darro, oo amni aan lagu sugi karin.
"Qorshaha lagu weeraray xalay xarunta xabsiga Bosaaso oo ahayd xabsigii maxaabiista ugu badan ee Al-Shabaab ay ku jirtey waxaa uu socdey mudo dheer oo ah ilaa (7 bilood iyo maalmo ah) Xogtana waxaa ay ahayd mid aan la wadaagney laamaha amniga Puntland," ayuu yiri Jeeniqaar.
Weerarka Xabsiga Boosaaso ujeedkiisu wuxuu ahaa in lagu sii daayo maxaabiis badan oo halkaasi Al-Shabaab uga xirnaa iyo kuwa Daacish katirsan, waxayna tiradooda gaareysay illaa 400 oo maxbuus.
Madaxweyne Deni ayaa gaarey shalay Boosaaso, isagoo kulan deg deg ah isagu yeeray Saraakiisha amniga gobolka Bari oo ka dhageystay warbixin ku saabsan sida weerarka u dhacay iyo qaabka looga hortagi kari falalka noocan ah.
Fahad Yaasiin ayaa lagu eedeeyay inuu is-hortaag ku sameeyay gudiga uu Rooble u xilsaarey turxaan-bixinta xubnaha cabashadda laga keenay.
Heshiiskii doorashadda Soomaaliya oo la saxiixay
Warar 27 May 2021 15:43